khuphula indlela yokusebenza kwemishini yokulungisa umshini
Kukhona ukuhlaziya ekusebenzeni kahle kokukhiqizwa komshini wokulungisa irayisi,Sidinga ukuqonda ngokugcwele indima ebalulekile yokuthuthukiswa komshini wokulungisa irayisi, yakha isu lokuthuthukisa isayensi ukuthuthukisa ukusebenza ngempumelelo komshini wokulungisa irayisi.Ukusebenza okujwayelekile komshini wokulungisa irayisi akunakusebenza nje kuphela ekusetshenzisweni kokukhiqiza kepha futhi kungakhulisa impilo yenkonzo yomshini wokulungisa ilayisi, kodwa futhi vumela opharetha ukuthi banciphise izehlakalo zezingozi ngesikhathi sokuhlinzwa.
1.Bheka ukuhlangana kwesikhunta okuphezulu nokungaphansi nokubumbana, hlola ukuthi idivaysi yokumisa iyahlangabezana yini nezidingo. Umshini wokulungiselela irayisi ngemuva kokuqala komoya oqhubekayo 2 imizuzu, uma kutholakala ukuthi unomsindo ongjwayelekile noma ukwehluleka kufanele kuyeke ngokushesha, kuzoba inkinga, kuze kube umshini wokulungisa irayisi ngemuva kwakho konke okujwayelekile ukuqala umsebenzi.
2. Lapho irayisi liphinde lafakwa, amandla kumele acinywe amiswe. Lapho isitshalo sokulungisa irayisi kuyasebenza, ingemuva lomshini ayivunyelwe ukuthi ime. Ukusebenza komshini wokulungisa irayisi akuyona into ejwayelekile, kufanele ayeke ukulungiswa. Kwenqatshelwe ngokuqinile ukusebenzisa isandla ukulungisa umshini wokulungisa irayisi, ukuze ugweme ukulimala esandleni.
3.Landela ngokuqinile umshini wokuxazulula umshini wokuphehla irayisi, ngokuya ngezinhlinzeko zomsebenzi ukuze ugqoke izinto zokuvikela abasebenzi. Ngaphambi kokuqala ukuhlola imoto ngokucophelela, ukushintshwa, imigqa nokusika kuyinto ejwayelekile, isimo esiqinile, hlola ukulawulwa kwemishini yezingxenye ezahlukahlukene, izinkinobho, njll. zisendaweni efanele.
Ukuqonda okuphelele nokutadisha ngokujulile kwendima ebalulekile ye UKUQUKUNYELA IMishini YOKWENZA IMALI nomthelela wayo, futhi yakhe izinhlaka zokuthuthuka zesayensi. umshini wokulungiselela irayisi wesinyathelo sokwenza umsebenzi omuhle wokulawula okusanhlamvu, ukugcina ukulingana kokulethwa kwelayisi kanye nesidingo, futhi sithuthukise ukuthuthuka okunempilo komnotho wase China kubaluleke kakhulu
Xhumana Nathi Ukwengeza ukusebenza kahle komshini wokucubungula irayisi